Ndị na -egwu ala Chia na -awụlikwa elu ma na -ere ihe niile | Site na Linux
Ọchịchịrị | 09/09/2021 17:17 | Emelitere ka 10/09/2021 00:08 | Noticias
Ọtụtụ izu gara aga ahụ ọkụ cryptocurrency ọhụrụ bidoro igbasa na netwọk, ọkachasị nke nwere nkwa gburugburu ebe obibi, cryptocurrency Chia, mana a katọrọ ya nke ukwuu n'ime ọnwa ndị na -adịbeghị anya yana ọnụ ahịa ya adaala nke ukwuu n'izu ndị na -adịbeghị anya ka ndị na -egwuputa ihe ebidola gbahapụ cryptocurrency.
Ma ọ bụ ya n'ime izu gara aga, ọtụtụ ndị na -egwuputa ihe amalitela ire ngwa ha, na -emezigharị draịva SSD siri ike. Ha na -agafe SSD ha ji eme ihe maka ndị ọhụrụ ha na -erekwa ha, kemgbe Chia na -achọ ibibi SSD, ọ bụ naanị oge tupu draịva "ọhụrụ" ahụ amalite ịda.
Chia bụ ntọala nke mkpụrụ ego chia ụdị mkpụrụ ego bitcoin. Ọ dabere na blockchain ejikọtara nke ihe mgbakọ na mwepụ dabere na nnwale nke inwe ohere diski n'ime oge.
Ekwuru na ọ na -achọkarị ọkụ na ọkụ eletrik karịa bitcoin, nke dabere na akaebe nke ọrụ ma chọọ nhazi CPU dị ukwuu. Ụkpụrụ Chia dị mfe: mgbe emepụtara ngọngọ na blockchain, a na -agbasa ya na ọnụ nke netwọkụ. Mgbe onye na -egwuputa ihe chọtara otu n'ime ihe mgbochi, ha na -ebipụta ya na netwọkụ ndị ọzọ na ndị ọzọ na -enye ihe ngosi kacha mma nke oghere.
Nke ahụ bụ, nchekwa nke ha nwere ike ị nweta na netwọkụ, a na -ebunye atọ kacha mma na netwọkụ, otu n'ime "sava oge" ọ nwere na -akwado oge enyere nnwale ahụ, yabụ, na -akwado ngọngọ ọhụrụ ahụ.
Echiche bụ na onye ọ bụla nwere ohere nchekwa efu nke enwere ike iji kwado azụmahịa ndị a na -enweghị iwepụta ụgwọ oriri ọzọ. Kemgbe mwepụta Chia, cryptocurrency ọhụrụ ebutela mgbanwe ụfọdụ n'ahịa draịvụ ike ya. Dị ka ụlọ ọrụ nyocha Context si kwuo, ọ malitere n'ụzọ siri ike, na -eduga na ụkọ draịvụ ike siri ike.
N'ọnwa June, a kọọrọ na ọ bụ ihe na-erughị 200.000 ụlọ ahịa ọkwa dị nso na ụlọ ahịa nwere ikike nke 10 TB na karịa ka erere ndị ọrụ na Europe na Eprel, na-anọchite uto nke 240% ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa na 2020..
N'otu oge ahụ, draịvụ ike NAS nke ndị na-ere ahịa rere ihe dị ka draịva 250.000, mmụba nke 167% kwa afọ.
Iji usoro nnwale nke oghere ma ọ bụ nnwale ike (PoC) Ọ chọrọ nnukwu ebe nchekwa, akara Chia nwere ike ibibi SSD ọgbara ọhụrụ n'ime izu ole na ole.
Dabere na akụkọ sitere na VNExpress, jiri SSD ka m wee na -egwu cryptocurrencies ọ na -atụ ụtụ nke ukwuu na draịvụ dịka otu ihe atụ 1TB SSD ejiri wepụta Chia naanị ọ ga -ewe ihe dị ka ụbọchị 80 ma e jiri ya tụnyere afọ iri eji diski eme ihe n'ọnọdụ ndị ọzọ.
Ọzọkwa, a na -agbagha ebumnobi gburugburu ebe obibi Chia n'oge na -adịbeghị anya, a naghịzi ele ibe Chia anya dị ka ihe ọzọ dị na gburugburu ebe obibi. Kemgbe ahụ, mkpuchi cryptocurrency adaala site na mkpirikpi mkpali nke $ 1,685 ihe dị ka ọnwa atọ gara aga ruo naanị $ 249.
N'ezie, mgbe ebidochara ya na Mee, Chia rutere ọnụ ahịa $ 1,685 ma kemgbe ahụ gbadara $ 212 na njedebe nke Ọgọst 2021, na -anọchite anya ọdịda karịa 85% na ọnụ ahịa na Mee. Nke a pụtara na a ga -ererịrị ihe ha jiri wepụta chia.
N'ụfọdụ, Ndị na -egwu ọla ochie nke Chia na -ere SSD ha ejiri mee ka à ga -asị na ha dị ọhụrụ. Nke a nwere ike bute ndakpọ olileanya, dịka mmadụ ga -atụ anya na ndekọ ọhụrụ ga -adịru ọtụtụ afọ karịa ọnwa.
Nke a pụtara na ha ga -ere ha n'okpuru ọnụ ahịa ahịa dịka nsuso Chia nwere ike ibibi nkezi SSD n'ime ọnwa abụọ, gbakwunyere na a na -emezigharị draịva eji eme ihe nke ukwuu. ka dị oke elu. Yabụ na ọ nwere ike bụrụ obere oge tupu ewepụta SSD ndị a tụgharịrị gaa n'ahịa ndị ọzọ dịka Asia ndị ọzọ, Europe na United States.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ndị na -egwu chia na -awụlikwa elu ma ha na -ere ihe niile
Purism na -ekwe nkwa ahụmịhe pụrụ iche na PureOS na mkpanaka Librem 5 gị